War Deg Deg Ah:-Qarax xoogan oo ka dhacay Ceel-waaq * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Ardaan Yare	 Last updated Sep 27, 2018
Wararka aan ka heleyno Degmada Ceel-waaq ee Gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayan in halkaasi goordhow uu ka dhacay Qaraxa xoogan oo laga maqlay xaafadaha ay ka kooban tahay Degmadaasi.
Dad goobjoogayaal oo ku sugan gudaha Degmada Caal-waaq ee Gobolka Gedo ayaa waxa ay inoo sheegeen in qaraxa uu ahaa mid xoogan,isla markaana uu ka dhacay maqaayad shaaha laga cabo oo ku taala degmada Ceel-waaq.
Sidoo kale waxaa la sheegay maqaayada uu qaraxa ka dhacay in uu ku dhowyahay saldhig Booliis oo ku yaala degmada Ceel-waaq ee Gobolka Gedo.
Ilaa iyo hada lama oga khasaaraha ka dhashay Qaraxaasi,inkastoo uu jiro khasaaro basle aan la xaqiijin inta uu la’eg yahay.
Two dead, 4 hurt in explosions in Somalia